Masjid Taariikhi Ah Oo Lagu Burburiyay Gobolka Amxaarada Ee Dalka Itoobiya – Borama News Network
Fallaago lalal xiriiriyay Jabhadda Xoraynta Shacabka Tigray (TPLF) ayaa waxaa lagu eedeeyay inay burburiyeen masjid taariikhi ah oo ku yaalla waqooyi-galbeed gobolka Amxaarada, iyo dilka arday wax ka dhiganaysay madaraso lagu barto diinta Islaamka oo halkaas ku taal.
Sida ay ku warrantay warbaahinta Fana, Golaha Sare ee Arrimaha Muslimiinta ee gobolka Amxaarada, ayaa sheegay in “argagixisada TPLF ay burburiyeen Masjid taariikhi ah oo ku yaal magaalada Zarema, ee waqooyiga Gondar, iyagoo la dhacay madaafiic culus”.
Warbaahinta Fana oo soo xiganaysa xoghayaha guud ee Golaha Sare ee Arrimaha Muslimiinta ee gobolka Amxaarada, Xaaji Maxamed Xasan, ayaa tilmaantay in xoghayuhu uu sheegay in “weerrarka uu qeexayo sida ururkaasi uu u sii wado falalka ka dhanka ah diinta ee qaybta ka ah sida ay doonayaan inay dalka ku burburiyaan”.
Waxay sheegeen in masjidkaasi uu boqolaal sano ku yaallay halkaasi.
Warbixintu waxa kale oo ay intaasi ku dartay in hogaamiyahaasi uu sheegay in fallaagadu ay madarasooyin ku laysay arday badan, caddayna ay u hayaan dhowr masjid iyo goobo diimeed oo uu sheegay inay TPLF burburisay.
Dowladda Itoobiya ayaa ballan qadaday in ay dib u dhiseyso masjid qarniyo jiray oo horay lagu waxyeelleeyay dagaalkii gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas ku dhex maray milatariga federaalka iyo xoogagga TPLF.
Masjidkan oo lagu magacaabo al-Nejashi ayaa lagu soo warramay in madaafiic lagu garaacay, la bililiqeystay islamarkaana lagauwaxyeelleeyay qabuuro taariikhi ah oo ay ku aasan yihiin qaar ka mid ah asxaabtii nabi Muxammad NNKH.
Hay’ad laga leeyahay waddanka Turkiga ayaa sanadkii 2015-kii billowday mashruuc lagu dayactirayay masaajidkan, waxayna mas’uuliyiinta hay’addaas sheegeen in ujeeddadoodu ay tahay sidii ay u nooleyn lahaayeen masjidkaas taariikhiga ah. Waxaa kale oo ay doonayeen in uu noqdo meel ay dalxiis ugu imaadaan dadka muslimiinta ah.
Waa Kuma Cilmaaniga Xiisadda Diblumaasiyadeed Ka Dhex Abuuray Turkey Iyo Dalalka Reer Galbeedka Iyo Qodobo Kale
Somalida Ku Nool Dalka Canda Oo Waajahaysa Xaalad Qalafsan Iyo Xaaladihii Ugu Dambeeyay
Bnnstaff Bnnstaff January 12, 2021 January 12, 2021
” Kuwii Burburiyay Boqortooyadii Cusmaaniyiintu Maanta Waxay Rabaan In Ay Joojiyaan Hurumarka Turkiga” Qoraa Reer Turki Ah
Bnnstaff Bnnstaff March 17, 2021
Abay Ahmed Oo Markii Ugu Horaysay Ka Soo Hadlay Furinta Hore Ee Dagaalka Ka Socda Dalka Itoobiya